Tanjon’ny Fanontàna 2018: Ahoana ny Fomba Nisafidianana Ireo Filoha Anatin’i Afrika Miteny sy Mampiasa ny Teny Frantsay? · Global Voices teny Malagasy
Tanjon'ny Fanontàna 2018: Ahoana ny Fomba Nisafidianana Ireo Filoha Anatin'i Afrika Miteny sy Mampiasa ny Teny Frantsay?
Voadika ny 03 Avrily 2018 1:59 GMT
Ireo filoham-pirenen'ireto firenena ireto amin'izao fotoana izao (manaraka ny fihodin'ny famantaranandro miala amin'ny ankavia ambony): RD Kôngô, Kamerona, Repoblikan'i Kôngô, Tôgô, Madagasikara ary Mali.
Ny 2018, hanandrana fomba fiasa vaovao hanatanterahana ny asantsika ireo toniandahatsoratry ny efitrano famoaham-baovaon'ny Global Voices, ireo mpitarika sampana, ary ireo mpikambana fototra hafa: matetika mametraka tanjona amin'ny antsipiriany sy manara-maso ny fivoarantsika ao amin'ny bilaogin’ny vondrompiarahamonina. Anatin'ity lahatsoratra manaraka ity, asehon'i Lova Rakotomalala, toniandahatsora-paritr'i Afrika miteny sy mampiasa ny teny Frantsay, ireo tetikasany ho an'ny ampahany voalohany amin'ity taona ity.
Ny taona 2018 dia taom-pifidianana lehibe ho ana firenena Afrikana maro miteny sy mampiasa ny teny Frantsay. Noho izany dia nanapa-kevitra izahay ato anatin'ny sampan'ny GV, Afrika miteny sy mampiasa ny teny Frantsay, fa tsy hiandry ny fizotran’izay valim-pifidianana manjavozavo ho avy eo hanafotra sy hamely anay tampoka, fa kosa hiezaka ny hialoha làlana ilay “tafiotra”, raha tianareo, ary handinika ny toejavatra misy ny fifidianana tsirairay alohan'ny resabe sy ny herisetra anatin'ny vanimpotoan'ny fampielezankevitra. Manohana ny iraka ataon'ny GV mba hihaino ireo vondrompiarahamonina tsy ampy rakitra ary hanita-pahalalàna momba azy ireo ity tanjona ity.
Bokikely fampidirana tsara ho an'ny fizotran'ity karazana fandrakofana ity izao ny lahatsoratra niaraha-nanoratra tamin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipam-paritr'i Afrika atsimon'i Sahara ary notarihan'i Nwach.
Ny fikasàna dia ny hanara-maso sy hitatitra ny resaka mialoha ny fifidianana misy ao amin'ny firenena tsirairay, mba hahafahana manakatra tsara kokoa ny tranga mety hiseho ary hiomanana amin’izay firosoan-javatra tsy mahazatra.
Ahitana ireto (kanefa tsy voafetra amin'izy ireo ihany) ny lisitry ny fifidianana filoham-pirenena hatreto, izay kasaina hatao ao amin'ny faritra amin'ny taona 2018:
Kamerona (Okt 2018)
RD Kôngô (Des 2018)
Mali (2018, mbola hofidiana ny volana)
Madagasikara (Novambra 2018)
Tôgô (2020 saingy misy hetsipanoherana mitaky ny fanesorana ny filoha sy ny fifidianana amin'izao fotoana izao)
Mandray mpiara-miasa mpitarika avy any amin'ny firenena isanisany ho mari-pamantarana iray ho an'ireo fandrakofana mialoha ny fifidianana. (5 amin'ny ankapobeny)
Mifandray amin'ireo mpiara-miasa aminay isam-paritra amin'izao fotoana mba hanao ny lisitr’ireo olona azo raisina ho mpiara-miasa.
Hanararaotra ny fifantohana mitombo misy amin'ny faritra ihany koa izahay handrakofana ireo olana ara-tsosialy sy ireo tantara mifantoka amin'ny maha olona.
Volana 1: Hapetako anaty sarintany ny tontolon'ny asa fanaovan-gazetim-bahoaka ao amin'ny firenena ho an'ireo feo mahaliana, ireo gazety mahaleotena, ary ireo mpanoratra anaty fampahalalam-baovao sôsialy miaraka aminà fifantohana manokana amin'ireo tenifototra izay fampiasa ao an-toerana.
Hifandray amin'ireo olom-pantatro mety hahita azy ireo aho, hanaraka azy ireo ary hampahafantatra ny tenako. Hanambara ny tanjon'ny tetikasa aho ary hijery raha misy tombontsoa iombonana. Hodinihako miaraka amin-dry zareo ny zavatra tiany atao sy ny fotoana mahafaka azy.
Volana faha-2: Hanohy hampandray anjara tsy an-kiato ny vondrompiarahamonina voakendry ao amin'ny fampahalalam-baovao sôsialy/bilaogy/sns aho. Amin'ny faran'ny volana, mikasa ny handray mpiara-miasa 3 fara-fahakeliny avy amin'ireo firenena voatanisa ireo aho, miaraka amin'ny fifanarahana momba ny drafitra mandroso amin'ny vanimpotoana mialoha ny fifidianana.
Volana faha-3 sy mihoatra: Hikarakara ny fampidirana mpiara-miasa vaovao ho an'ny fandrakofana ny fifidianana aho, hampahafantatra azy ireo any amin'ny vondrompiarahamonina ary hanazava ny fomba fiasan'ny GV, ny dikan'ny GV ary ny fomba ahafahan'izy ireo manampy. Amin'ny alàlan'ny fanampian'izy ireo no hanaparitahanay ny drafitra fandrakofana, hanomezana sehatra ary hanamafisana ny lafiny maha olona momba ny fandrakofana.
Amin'ny faran'ireo telo volana, hikendry mpiara-miasa mpitarika 5 aho izay hitarika ny fandrakofana ny fifidianana.
Tanjona ihany koa ny hanana tantara lava iray isaky ny firenena izay hamoaka ny lafiny mampiavaka ny firenena amin'ny fomba tsy mbola vita tanatin'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Miaraka amin'ny ekipa ahitàna ireo mpiara-miasa sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo hafa, hanao drafitra hatao lasitra ho an'ny fandrakofana ny fampielezankevitra ho an'ny firenena tsirairay izahay.
Alohan'ny hanombohan'ny fifidianana, tokony efa namoaka bokikely mora takarina ho an'ny fifidianana ho avy isika.
2 andro izayAngola
09 Aogositra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
Notendrena ho praiminisitra any Armenia indray i Nikol Pashinyan